မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေး အရေးပေါ် အခြေအနေ ရောက်ရှိ | Danya Wadi
»ကျန်းမာရေး»မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေး အရေးပေါ် အခြေအနေ ရောက်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေး အရေးပေါ် အခြေအနေ ရောက်ရှိ
Posted by danyawadi on July 28, 2017 in ကျန်းမာရေး
အရေးကြီးသတင်း ! Red Alert Warning !
အများသိအောင် ရှယ်ပေးကြပါ။ သတိထားကြပါ။
Flu ဟာ ပိုးအမျိုးအစား တမျိုးတည်းဆိုရင် မစိုးရိမ်ရ ပေမယ့် အခု ၃ မျိုး အထိ တွေ့ရှိလာမှုကြောင့် အန္တရာယ်ဇုံထဲ ဝင်သွားပါပြီ။ ဒီ ၃ မျိုးသာ Mutation ဖြစ် ရောစပ်ပြီး ပိုးအသစ်ထွက်လာခဲ့ရင် ဘယ်လိုမှ ထိန်းချုပ်လို့ မရနိုင်အောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
လူနာနဲ့ ထိတွေဆက်ဆံပြောဆိုခဲ့သူ အားလုံးလောက် နည်းနည်း ကူးစက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါရှိသူရဲ့ ချောင်းဆိုးခြင်း နှာချေခြင်းတို့ငြောင့် ပြင်ပရောက်လာတဲ့ ပိုးဟာ နေရောင်ခြည်ရတဲ့ နေရာမှာ နာရီအနည်းငယ် နေနိုင်ပြီး အရိပ်အခန်းတွင်းမှာဆိုရင် တနေကုန် ၂၄ နာရီ အထိ ကူးစကါနိုင်ချေရှိနေပါတယ်။ ပြင်ပရာသီဥတုဟာ စွပ်စိုနေမယ်ဆိုရင် အချိန်ပိုကြာနေနိုင်ပါတယ်။
ဒီအုပ်စုဟာ ပေါင်းစပ်လွယ်ပြီး ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ ပိုးအသစ် ပေါ်လာမှာ အစိုးရိမ်ရဆုံး အခြေအနေ ဖြစိပါတယ်။
ရန်ကုန် ပုသိမ် ထားဝယ် မကွေး ပဲခူး ဆိုတော့ နေရာ တော်တော် စိပ်လာပါပြီ။
အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်ဧရိယာမှာ H1N1 နဲ့ H3N2 ဆိုပြီး၂ မျိုးတွေ့နေရခြင်းက ပိုပြီး အန္တရာယ်နဲ့ နီးနေ ကြောင်း ပြနေပါတယ်။ ထားဝယ်မှာတွေ့ရတဲ့ H5N1 သာ ရန်ကုန်ကို ရောက်လာခဲ့ရင် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာရသည်အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဂရုပြုကြပါ။ ရန်ကုန်မှ ထားဝယ်ဒေသသို့ ခရီးသွားမှု ထားဝယ်ဒေသမှ ရန်ကုန်သို့ ခရီးသွားမှုများ ဖြစ်နိုင်လျှင် ရှောင်ကြဉ် ပေးကြပါ။ ဘယ်လိုမှ မတတ်သာလို့ ခရီးသွားရမည် ဆိုလျှင် မိမိရောက်ရှိတဲ့ နယ်မြေသစ်က Public area မှာ Mask လုံးဝ မဖြုတ်ကြပါနဲ့။
ဒီလိုပဲ ရန်ကုန်က ပြည်သူတွေ ထားဝယ်ဒေသကို ခရီးသွားရလျှင် ထားဝယ်ဒေသက Public area မှာ Mask လုံးဝ မဖြုတ်ကြပါနဲ့။ ဒီလို လိုက်နာဆောင်ရွက် မှသာ Ful virus ပိုး ၂ မျိုး ဖြစ်တဲ့ H1N1 နှင့် H5N1 တို့ Mutation ဖြစ်မှုကို တားဆီးနိုင်ပါလိမ့် မယ်။ ရန်ကုန်ဒေသတွင်းမှာကိုပဲ Mutation ဖြစ်ပေါ်ဖို့ အလားအလာ ရှိနေပါတယ်။ အခု ရန်ကုန်မှာ H1N1 နဲ့ H3N2 တို့ ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။
ပြည်သူအားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ။ Mask နှာခေါင်း ပါးစပ်အုပ်ကို Public area မှာ မပျက်မကွက် တပ်ဆင်ကြခြင်းအားဖြင့် Virus မျိုးအသစ်ပေါ်မလာရေး ကူညီပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရေးသူ – ဒေါက်တာကျော်ဆွေ
← ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ရှာဖွေရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အသစ်ပြောင်းလဲ ခန့်အပ်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အိမ်တစ်လုံး ဗလီထင်ပြီး အဆောက် အအုံ ဖျက်ခံရ →